AppleCare + dia misy any Aostralia sy Nouvelle Zélande | Avy amin'ny mac aho
Ny rafitra fiarovana fanampiny izay omen'ny Apple antsika amin'ny alàlan'ny AppleCare any amin'ny ankamaroan'ny firenena, ao anatin'izany ny AppleCare + modality, dia mamela antsika hanana fifanarahana fiantohana fanampiny hanaronana misy tranga mety hitranga amin'ny fitaovantsika, na amin'ny fampiasana mahazatra na amin'ny fahavoazana ateraky ny lozam-pifamoivoizana tsy ilaina.
AppleCare dia misy manerantany ho an'ny mpampiasa rehetra te-hanakarama azy io, saingy safidy iray fotsiny ny mandinika ao amin'ny Mac, noho ny fanampiana lava natolony. Na izany aza, Ny mode AppleCare + dia tsy misy raha tsy any Etazonia sy Japon ihany. AppleCare + dia manolotra antsika ny fiovan'ny terminal na ny fitaovana. Aostralia sy Nouvelle Zélande dia vao nampiana an'ity vondrona mpampiasa voafetra sy voafantina ity.
Apple dia manolotra fotoana antsika 60 andro aorian'ny datin'ny fividianana ahafahana mifanaraka amin'ny AppleCare sy AppleCare +, raha mbola mandalo ny diagnostika nataon'i Apple ny vokatra, na dia ny mahazatra aza dia ny manakarama azy amin'ny fotoana ividianana ireo fitaovana vaovao. Ny vidiny any Aostralia ho an'ny AppleCare + ao amin'ny Mac Mini dia 149 dolara aostraliana (95 euro), raha ho an'ny MacBook Pro 15-inch miaraka amin'i Touchbar dia tafakatra hatrany amin'ny 449 dolara aostraliana (eo amin'ny 280 euro) ny vidiny.
Raha sendra tratry ny lozam-pifamoivoizana misy eo amin'ny fitaovantsika izahay, izay misy fiatraikany amin'ny efijery sy ny fahasimban'ny tarehy amin'ny MacBook Pro 15-inch dia tsy maintsy mandoa 129 dolara aostralianina isika ary 429 dolara ho an'ny fanamboarana hafa. Any Nouvelle-Zélande, AppleCare + dia mitentina 149 N $ (88 euro) raha ny AppleCare + kosa ho an'ny MacBook Pro 15-inch miaraka amin'ny Touchbar dia 539 N $ (318 euro). Raha mila fanampiana misy fiatraikany amin'ny efijery na fahasimban'ny tarehy amin'ny MacBook Pro ianao, dia miakatra hatramin'ny $ 169 sy $ 499 ny vidiny misy fahasimbana hafa izay tsy mifanaraka amin'ny efijery na fanimbana hatsarana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » AppleCare + dia misy any Aostralia sy Nouvelle Zélande
Bridge Constructor Portal, lalao vaovao manomboka amin'ny Mac App Store